အိုက်ဇောလ်ရောက် မြန်မာယက္ကန်းသမားတဦးနဲ့ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်း | Home
« Chin Advocacy Group ခေါ် ဘာသာရေးစောင့်ကြည့်မှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
ချင်း နှစ်ပါတီ ပူးပေါင်းပြီး ပါတီ ၁ ခုအဖြစ်ရပ်တည်မည် »
အိုက်ဇောလ်ရောက် မြန်မာယက္ကန်းသမားတဦးနဲ့ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်း
May 15, 2012 by khonumthungburmese မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွင် ယက္ကန်းခတ်ရင်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့ ယက္ကန်းသမားများ စတင်ရောက်လာသည်မှာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကတည်းက ပင်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိယက္ကန်းသမားများ၏ အခြေအနေ၊ ပြသာနာများ နှင့် အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များကို တင်ပြနိုင်ရန် ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကတည်းက နေထိုင်ခဲ့သူ ဦးမောင်ဆန်းကို ခိုနူမ်းထုန်သတင်းဌါနက အခုလို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခိုနူမ်းထုန်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်မြို့နယ်ကနေ လာသလဲ?
ကိုမောင် ။ ။ ရွှေဘိုမြို့နယ် ဆိုက်ခွန်ကျေးရွာကနေလာတာပါ။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ မီဇိုရမ်ကို ဘယ်ခုနှစ်က ရောက်လာတာလဲ?
ကိုမောင် ။ ။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ လက်ရှိအနေထားမှာ ဇောင်းသွေရပ်ကွက်ရှိ Pi Nutei ယက္ကန်းရုံမှာ ဦးစီးမှုးအနေနဲ့နေပါတယ်။
ခိုနှုမ်းထုန်။ ။ Pi Nutei ယက္ကန်းရုံမှာ ယက္ကန်းစင်ဘယ်နှစ်စင်ရှိပါသလဲ?
ကိုမောင် ။ ။ ဒီရုံမှာက ယက္ကန်းစင်ပေါင်း ၁၀၂ စင်၊ စက်စင်က ၁ စင်၊ ခြား ၂ လုံး နှင့် လူဦးရေ ၁၀၀ ကျော် ကို ဦးစီးခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာပါ။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ အဲလို လူဦးရေ ၁၀၀ ကျော် နှင့် ယက္ကန်းစင် ၁၀၀ ကျော်ကို ဦးစီးခေါင်းဆောင် လုပ်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုး တွေ့ကြုံရသလဲ?
ကိုမောင် ။ ။ အရင်နှစ်နဲ့မတူပဲ ဒီနှစ်မှာတော့ ယက္ကန်းသမား ရှားပါးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် အခက်အခဲရှိတာပေါ့။ ပြီးတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းကတက်ပြီး ယက္ကန်းခတ်ခကျတော့ မတက်ဘူး ဒါကြောင့် ယက္ကန်းသမားတွေက လက်ခမြင့်ချင် တယ် အိမ်ရှင်ကလည်း သူမကိုက်တော့ မပေးချင်တာနဲ့၊ တချို့ယက္ကန်း သမားတွေကလည်း ဒီဇိုင်းကောင်းတာ လိုချင်တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အိမ်ရှင်နဲ့ယက္ကန်းသမားကြားမှာ နည်းနည်း ညှိပေးရတာပေါ့။ အရင်တုန်းကဆိုရင် တပတ်မှာ ရှုပီး ၈၀၀၊ ၁၀၀၀ ဝင်ငွေရရင် ကိစ္စမရှိဘူးလေ၊ အခုအတိုင်းအတာမှာကြတော့ ရှုပီး၂၀၀၀ ကျော်ရမှ သူတို့အတွက် စားလို့သောက်လို့ အဆင်ပြေ တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ အရင်တုန်းကနဲ့ အခု ငွေလှဲနှုန်းကလည်း မတူဘူးလေ အခုငွေလှဲနှုန်း ကျနေတာဆိုတော့ လူတယောက်သည် အနည်းဆုံး ရှုပီး ၁၅၀၀ ရမှ အဆင်ပြေနိုင် မှာဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ အိမ်ရှင်ကလည်း သူ ရောင်းကွက်ကောင်းမဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးကို တင်ချင်တာ၊ ယက္ကန်းသမားကတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ခတ်ကောင်းပြီး ပိုက်ဆံရ မဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးကို လိုချင်တာ။ အဲလိုမျိုး အခက်အခဲပြသာနာ မျိုးတော့ ရင်ဆိုင်ရတာပေါ့။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ ဘာကြောင့် မီဇိုရမ်မှာ ယက္ကန်းသမားတွေ ရှားပါးလာရသလဲ?
ကိုမောင် ။ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာက လက်ရှိ အတိုင်းအတာမှာ တော်တော် လေးကောင်းနေ တယ်။ ကျနော်တို့တွက်ကြည့်ဗျာ၊ ဒီမှာ လက်မ ၆၀ ဗလာတကွင်းကို ရှုပီ ၁၃၀ ဝန်းကျင်ဖြင့်သွင်းတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက ၇၂ လက်မကို ကျပ်ငွေ ၄၂၀၀ နဲ့သွင်းရတယ်။ ငွေလှဲနှုန်းနဲ့ကြည့် မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာက တော်တော်လေး ကောင်းတဲ့ အတိုင်းအတာ မှာရှိတယ်။ ဒီကနေ မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားတဲ့ ယက္ကန်းသမားတော်တော်များ တယ်။ ပြီးတော့ ဟိုမှာ ယက္ကန်း ခတ်ခ ပိုရတယ်။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေ တဖြေးဖြေးကောင်းလာတဲ့ အနေအထားမှာရှိလာပြီဆိုတော့ ကိုမောင်ဆန်းတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်သွားဖို့အစီအစဉ်ရောရှိလား?
ကိုမောင် ။ ။ ဟား…. ရှိတယ်။ ကျနော်တဦးတည်းမဟုတ်ဘူး ယက္ကန်းသမားအားလုံးပြန်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။ ကျနော်မပြန်ခင် ပြန်ကြမဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ပြန်ကြမဲ့အစီအစဉ် အများကြီးရှိတယ်။ ဒီမှာအချိန်ကြာကြာ နေဖို့လည်း ရည်ရွယ်ချက်သိပ်မရှိတော့ဘူး။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ ဒီမှာ နေတဲ့အတောအတွင်း စားရေးသောက်ရေးမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုး ရှိပါသလဲ?
ကိုမောင် ။ ။ အစားအသောက်ပိုင်းမှာကျတော့ ဒီရပ်ကွက်မှာက ဈေးမရှိတော့ ဆိုင်လေးတွေမှာ ဝယ်စားနေရတာ ဆိုတော့ ဈေးပိုပေးရတာပေါ့ဗျာ။ ကောင်းကောင်းစားချင်တယ်ဆိုရင် ဈေးကြီးအထိ သွားရတာပေါ့။ ကျန်းမာရေးပိုင်းမှာတော့ လက်ရှိအခြေအနေမှာက တုပ်ကွေးဆိုတဲ့ရောဂါအဖြစ်များ တယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မိုးကျတာများတယ်ဆိုတော့ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ ဝမ်းလျောရောဂါ တွေဖြစ်ကြ တယ်။ ဒီရပ်ကွက်မှာတော့ ဆရာဝန်တွေ ဆေးဝါးတွေ လိုအပ်နေတာတော့ အမှန်ပါ။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံ NGO ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြား NGO ကနေဖြစ်ဖြစ် အခမဲ့ဆေးကုသ ပေးတာမျိုးရောရှိလား?
ကိုမောင် ။ ။ ဒါမျိုးတွေက ရှားပါတယ်။ HIV ရောဂါသွေးစစ်တာတွေ၊ ဆေးဝါးတွေပေးတာတို့၊ ရောဂါစစ်ရင်းနဲ့ သွေးစစ်ယူတာတို့ ဒါမျိုးလောက်ပဲရှိပါတယ်။ သီးသန့်ဆေးလာကုပေးတာမျိုးတော့ မရှိသလောက်ပါပဲ အင်မတန်မှ ရှားပါတယ်။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် အိုက်ဇောလ်မှာ ယက္ကန်းဘယ်နှစ်ခုံလောက်ရှိသလဲ?
ကိုမောင် ။ ။ အခု နေထိုင်တဲ့ ဇောင်းသွေရပ်ကွက်မှာ ယက္ကန်းစင်ပေါင်း ၇၀၀ ဝန်းကျင်လောက် တော့ရှိတယ်။ အိုက်ဇောလ် တမြို့လုံးနဲ့ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ ၁၀၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။
ခိုနှူုမ်းထုန်။ ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မီဇီုရမ်ပြည်နယ်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံပြန်တာများတယ်လို့သိရတယ်။ ဆိုတော့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာပြည်ကနေ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကို ယက္ကန်းခတ်ဖို့ တက်လာတဲ့ ယက္ကန်းသမား တွေ ရောရှိလား? ကိုမောင် ။ ။ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲ အယောက် ၃၀ ဦး ၂ သုတ်လောက်ရောက် လာတယ်။ အခြား ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပေ့ါ။ သင်္ကြန်ပြီးနောက် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကို ယက္ကန်းခတ်ဖို့ တက်လာတဲ့သူ ၈၀ ဦး ကျော် ရှိပြီ။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ ခုလိုအချိန်မျိုးမှာ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကို ဘာကြောင့် ယက္ကန်းခတ်ဖို့ တက်လာကြ တယ်လို့ ထင်သလဲ?
ကိုမောင် ။ ။ အဲဒီအပေါ်မှာ သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် အခုတက်လာတဲ့သူတွေက အများအားဖြင့် မုံရွာနယ် ကျေးလက်တောရွာမှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေများတယ်။ မြို့ပေါ်နဲ့လည်း အလှမ်းဝေးတယ်။ တောရွာမှာ ဆိုရင် စောင်တွေခတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာက စောင်တွေခတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ အရင်းအနှီးကလို သေးတယ်လေ။ ဒီဘက်တောင်ပေါ်မှာကြတော့ အရင်းအနှီးမလို၊ ငွေစိုက်စရာမလို ယက္ကန်းခတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီး အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ တက်လာ ကြတာပါ။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ ဒီမှာလုပ်တဲ့ ယက္ကန်းသမားတွေရော် လုပ်အားခ ပုံမှန်ရကြသလား?
ကိုမောင် ။ ။ ကျနော်တို့တော့ရတယ်၊ စနေတပတ်ဆိုရင် တစ်ရှုပီမှ မကျန်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို တပတ်မှာ ရှုပီး ၂ သိန်း ဝန်းကျင်ကို အလုပ်ပိုင်ရှင်က ရှင်းပေးနေရပါတယ်။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ ဘာလို့ဒီယက္ကန်းပညာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေရသလဲ?
ကိုမောင် ။ ။ ကျနော့မိဘတွေကိုက ယက္ကန်းလောက ထဲကနေ ကြီးပြင်း လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ ကျနော်လည်း ယက္ကန်းတောထဲ မွေးဖွားလာတယ်၊ ယက္ကန်းနဲ့ပဲ ထိတွေ့မြင် တွေ့နေရတဲ့အတွက် ယက္ကန်းလောကထဲကို ကျနော်လည်း အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအဖြစ် ခုချိန်ထိ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတယ် ပေါ့ဗျာ။ အဖေ၊ အမေ ရဲ့ အမွေဆိုရင်လည်းပဲ မမှားဘူးပေါ့။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ ကိုမောင်ဆန်းရဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲ?
ကိုမောင် ။ ။ ကျနော့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ မြန်မာပြည်ပြန်ရင်လည်း ဒီယက္ကန်းနဲ့ပဲ အသက် မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုဖို့ ရည်ရွယ် ထားပါတယ်။ ကျနော် တကယ်ပြန် မယ်ဆိုရင် မြစ်ကြီးနားဘက်မှာ အခြေချဖို့များ ပါတယ်။ ကျနော့မှာ သားလေးရှိပါတယ်။ သူ့ကို ပြုစုပျိုးထောင် ရင်း ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထား ပါတယ်။
ခိုနူမ်းထုန်။ ။ အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ခိုနူမ်းထုန်အဖွဲ့အနေနဲ့ ကိုမောင်ဆန်းအပေါ် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Posted in တွေ့ ဆုံမေးမြန်းချက် | LeaveaComment	Comments RSS